မျက်စိနှစ်ကွင်း အလင်းမရသူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေး၊ အမြင်တွေ - Hello Sayarwon
အမြင်အာရုံဆုံးရှုံးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝဟာ အရာရာ ခက်ခဲလှပါတယ်။ သာမန်လူတွေအကြားမှာ ဘဝကို လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကနေ မချော်ထွက်သွားအောင် ရပ်တည်ရှင်သန်နေထိုင်နေကြတဲ့ မျက်စိနှစ်ကွင်း အလင်းမရသူတွေဟာ အထင်ကြီးလေးစားဖွယ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။
မျက်စိနှစ်ကွင်း အလင်းမရတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးတွေထဲမှာ ဘာတွေရှိနေမလဲ? ဒီလိုအတွေးမျိုး သင်တွေးမိဖူးရဲ့လား? သူတို့ ဘယ်လိုခံစားနေကြရသလဲ? သူတို့က လုံးဝ အမြင်အာရုံ ကွယ်ပျောက်သွားတာလား? တချို့တလေသော အရာတွေကို မြင်တွေ့ရနိုင်သလား? သူတို့ရဲ့ ဘဝကို တွေးဝင်ခံစားကြည့်ကြရအောင်။
ဒီကိစ္စက ယေဘုယျဆန်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သာမန် အမြင်အာရုံပြည့်စုံနေသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ အမြင်အာရုံချို့တဲ့နေသူတစ်ဦးရဲ့ ရှုမြင်ပုံ၊ ခံစားပုံ၊ သိရှိနိုင်ပုံတွေကို နားလည်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံချို့တဲ့နေသူအများစုဟာ ရောဂါအခြေအနေ အနုအရင့်နဲ့ နက်ရှိုင်းမှုအပေါ်မူတည်ပြီး အာရုံခံနိုင်စွမ်း သိရှိနိုင်စွမ်းလည်း ကွာခြားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာမန်လူတွေနဲ့ တူညီတဲ့အချက်ကတော့ ဦးနှောက်ဟာ အချက်အလက်တွေကို သိနိုင်စွမ်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပြီး သာမန်လူတွေ အမြင်အာရုံအခြေခံ မှတ်သားထားတာလိုမျိုး သူတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကလည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ မှတ်သားပေးထားနိုင်ပါတယ်။
အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းသူတွေ မြင်နိုင်စွမ်းတဲ့အရာရှိသလား?
ဒီနေရာမှာ ရောဂါအမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားမှုတစ်ချို့ရှိနေတာကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
မွေးရာပါ အမြင်အာရုံချို့တဲ့ခြင်း (Blind From Birth)
မွေးရာပါ အမြင်အာရုံချို့တဲ့ဝေဒနာမျိုး ခံစားနေရသူတွေအနေနဲ့ ဘာကိုမှ မြင်နိုင်စွမ်းမရှိသလို ဘာကိုမှလည်း အမြင်အာရုံ အခြေခံအတွေးမျိုးနဲ့ ခံစား သိရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အရာအားလုံးဟာ ဟာလာဟင်းလင်းကြီးလိုဖြစ်နေမှာပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ မျက်လုံးကို မှိတ်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် ကိုယ်ဘာတွေ မြင်ရလဲ ခံစားကြည့်ပါ။ ဒီသဘောမျိုးပါပဲ။
ပြင်ပ ပယောဂကြောင့် အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Went Totally Blind)
ဒါကတော့ မွေးရာပါ အမြင်အာရုံချို့တဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အသက်အရွယ် တစ်ခုရောက်ချိန်မှာ ပြင်ပပယောဂတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် မျက်စိနှစ်ကွင်း အလင်းမရဖြစ်ခဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အမြင်အာရုံဟာ မှောင်မဲနေတဲ့ ဂူကြီးတစ်ခုထဲ ရောက်နေသလိုမျိုးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ တစ်စုံတစ်ယောက်က အလင်းရောင်တစ်မျိုးမျိုးပေးလိုက်ရင် အရိပ်တွေ၊ ဝေဝေဝါးဝါး ပုံရိပ်တွေ၊ အရောင်တချို့တလေတွေနဲ့ မီးရောင်တွေကို အတန်ငယ် မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း (Legally Blind)
Legally Blind ဖြစ်နေသူတွေဟာ အပြည့်အဝ အမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးနေကြသူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ သူတို့တွေဟာ အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ် လိုက်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုအတွင်းကို မြင်နိုင်ကြသလို အရောင်တွေကိုလည်း မြင်နိုင်ကြပါတယ်။
ဒီဝေဒနာကို ခံစားနေကြရသူတွေဟာ နေအလင်းရောင်၊ ကင်မရာ ဖလက်ရှ်မီးရောင် စတာတွေလိုမျိုး အလင်းရောင်တွေကိုသာ မြင်တွေ့နိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ပုံရိပ်တွေက ဘာတွေဆိုတာကို သိရှိနိုင်ကြခြင်းမရှိကြပေမယ့် မီးအလင်းရောင် ဘယ်နားမှာရှိတယ်၊ ဖွင့်ထားတယ်၊ ပိတ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုတော့ သိနိုင်ကြပါတယ်။
ပြင်းထန်တဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာကြောင့် ဒါမှမဟုတ် လေဖြတ်တာကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အမြင်အာရုံချို့တဲ့မှုဝေဒနာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာရှင်တွေဟာ သတ်မှတ် အကျယ်အဝန်းတစ်ခုစာ အခြေအနေလေးကိုသာ သီးသန့်မြင်နိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ မြင်နိုင်စွမ်းအားဟာ ၁၀ ဒီဂရီထက် ပိုမိုနည်းပါးပါတယ်။ တူးမြောင်းတစ်ခုထဲမှာ ရောက်နေသလို သတ်မှတ်မြင်ကွင်းကိုသာ သီးသန့်မြင်နိုင်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
အမြင်အာရုံ ချို့ယွင်းနေသူတွေဟာ အိပ်မက်ထဲမှာရော မြင်နိုင်သလား?
မွေးရာပါ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းနေသူတွေဟာ အိပ်မက်မက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေဟာ ပုံရိပ်တွေကို မြင်တွေ့ရခြင်းတော့ မရှိပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ အိပ်မက်တွေထဲမှာ အသံတွေ၊ ထိတွေ့ခံစားသိစိတ်တွေ၊ အနံ့၊ အရသာနဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေသာ ပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ် ကြီးမြင့်မှ အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူတွေရဲ့ အိပ်မက်တွေထဲမှာတော့ ပုံရိပ်တွေ ပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ လေ့လာချက်တွေအရဆိုရင်တော့ တချို့သော အမြင်အာရုံချို့ယွင်းသူတွေဟာ အိပ်မက်မက်နေစဉ်မှာ အလင်းရောင်ကို မြင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။